'६ अर्बको आयात विस्थापन गर्न फर्निचर मेला' Bizshala -
'६ अर्बको आयात विस्थापन गर्न फर्निचर मेला'
-राजेश अग्रवाल(अध्यक्ष)-नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ अशोसिएसन
यसपटकको फर्निचर एक्स्पो कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ ?अघिल्लो वर्षभन्दा केही ढिलो भयो नि, किन ?
-यसपटकको फर्निचर एक्स्पो यही असोज ४ देखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुन गइरहेको छ । नेपालमा भएको बिम्स्टेक बैठकका कारण केही ढिला हुन गएको छ ।
यसपटकका एक्स्पोका विशेष आकर्षण के छन् ?
-पहिले ५ वटा हलमा कार्यक्रम गरिएकामा यसपालि ब्राण्डिङका आधारमा भित्र र बाहिर पनि स्टल राखिनेछ । पहिले अर्डरको मात्र व्यवस्था हुन्थ्यो भने यसपालिबाट अवलोकनकर्ताले खरिद पनि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
दशैं र ठूला चाडपर्व अगाडि नै यस्तो मेला लगाउनुको उद्देश्य के हो ?
-आम नेपालीहरुले दशैंका बखत बचत गरको रकमबाट सामान जोड्ने परिपाटी रहेको छ । उनीहरु दशैं तिहारका लागि नयाँ सामान जोड्ने प्रवृतिलाई क्याच गर्नका लागि कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको छ । मोफसलका व्यापारीहरु पनि रिटेलका लागि सामान अर्डर गर्न आउने उपयुक्त समयमा हामीले कार्यक्रम बनाएका हौं ।
एक्स्पो अवधिभर कति रकम बराबरको कारोबार हुने र कति अवलोकनकर्ता आउने आँकलन गर्नुभएको छ ?
-गत वर्ष ४० हजारले अवलोकन गरेका थिए । यसपालि ७० हजारको आंकलन गरेका छौं । यसपालि फर्निचरको ब्राण्डिङ गर्ने म’ख्य उद्देश्य रहेर त्यसैमा केन्द्रित भएका छौं ।
पछिल्लो समय नेपालमा फर्निचरको बजार कसरी बिस्तार भइरहेको छ ? यो क्षेत्रमा कति उद्यमी व्यवसायी संलग्न छन् ?
-धनाढ्यहरुले मात्र प्रचलनमा ल्याउने विगतको अभ्यास अब आम नेपालीहरुले आवश्यकता बनिसकेको यथार्थ हामीमाझ छ । गत आ.व.मा ३० अर्बको कारोबार भएको थियो । काठमाडौं जिल्लामा मात्र ७ सय सदस्य रहेकोमा नेपालभरि हाराहारी ११ सय सदस्य छन् ।
नेपालमै बनेका फर्निचरहरु अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी किन हुन नसकेका ? हाम्रा मौलिक कलाले भरिएका फर्निचरको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बजार कस्तो छ ?
-कामदार र कच्चापदार्थ नै मुख्य समस्या हुन । कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्दा लागत बृद्धि भई प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको हामी स्वीकार गर्छौ । नेपाल सरकारको नीति समिलबाट मात्रै कच्चापदार्थ किन्दा एक त लागत बढ्ने र अर्को व्यावहारिक कठिनाई र नीतिगत सुधार गरेमा करिब ६० प्रतिशत आयात विस्थापन हुनेछ । टिकाउ र भरपर्दो भएका कारण विश्व बजारमा यसको माग उच्च रहेको छ ।
नेपालको फर्निचर र फर्निसिङ व्यवसाय बिस्तारका लागि के आवश्यक छ ? राज्यको नीतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ ?
-मोटामोटी रुपमा ऊर्जाको समस्या हल भएबाट पनि बजार दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । व्यवसाय गर्न सहज नै भएतापनि सरकारी नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा र कच्चापदार्थको आपूर्तिमा भएको असहजताले भने पक्कै चुनौती थपिएको छ ।
फर्निचर व्यवसायमा भविष्य खोज्न चाहनेलाई तपाईका के सुझाव छन् ?
-हाम्रो संघ नयाँ व्यापारी साथीहरुले फर्निचर व्यापार व्यवसाय गर्न चाहेको खण्डमा उपयुक्त मूल्यमा होलसेल खरिद र आवश्यक सरसल्लाह दिन १० बजे देखि ५ बजेसम्म ढोका खुल्ला रहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।
मेलामा कतिवटा स्टल हुन्छन् ? कस्ता स्टल हुन्छन् ? विदेशी कम्पनीका पनि स्टल रहन्छन् ?
-करिब ९५ वटा स्टल रहने छन् । भित्र ४८ वटा र बाँकी बाहिर स्टल माग अनुसार रहेका छन् ।
अन्त्यमा, सरकार प्रशासन नभई अभिभावकको भूमिका खोज्दछौं ।गत वर्ष ६ अर्ब फर्निचर आयात भयो बिडम्बना मान्नुपर्छ । स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न , एउटै छानामुनि उपलब्धिमूलक जानकारी हासिल गर्न पनि मेला अवलोकनका लागि आग्रह गर्दछु ।
प्रस्तुती: भक्तराज रसाइली
मल्टिपर्पसको सेयर मूल्यमा बिहीबार पनि सर्किट
नेपाल इन्स्योरेन्सद्वारा ७.५% बोनस सेयरको घोषणा
आरामदायी रिटायरमेन्ट चाहनुहुन्छ भने यी गल्तीबाट बच्नुहोस्
पोखरा : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल...
स्थानीय तहमा दातृ निकायले आफूखुशी काम गर्न पाउँदैनन् :
काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु...
हिमनदी तीव्र दरमा पग्लँदै, करोडौँ मानिस जोखिममा
शीतयुद्धकालीन जासुसी भूउपग्रहहरूले खिचेका तस्बिरहरूले हिमालयका...
ट्याक्सीमा नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव : वर्गीकरणअनुसार फरक–फरक
काठमाण्डौ । के तपाइँ कतै जाँदा प्रायः ट्याक्सी चढ्नुहुन्छ ? त्यसो हो...
अब नेपालमा विना दर्ताका अवैध मोबाइल नचल्ने
काठमाण्डौँ । नेपालमा अब विना दर्ता अवैध रुपमा भन्सार छलेर...